About Us - Shijiazhuang Yiling Isibhedlela
Yiling Group Inkampani ingenye ezingeni China kazwelonke ukhiye okusezingeni eliphezulu futhi entsha ubuchwepheshe ibhizinisi. It yasungulwa ngu Professor Wu Yiling, academician, komfundisi abafundi zobudokotela ngo-1992.
Ngesiqondiso "Ukuxilongwa futhi Ukwelapha Indlela TCM Izifo Collateral" okuyinto udunyiswa njengoMdali Chinese National angaphatheki Cultural Heritage , Yiling iqembu inkampani inamathela isimiso ukuthatha TCM ukuthuthukiswa zezifundiswa umfutho kwezimboni, ukuthatha ubuchwepheshe njengoba umanduleli, emakethe njengoba Umhlahlandlela , wakha tekusebenta "Five e Omunye" imodi njengoba zokuhlanganisa ukucwaninga kwesayensi, imikhuba yomtholampilo, ukukhiqizwa, ukumaketha nasekufundiseni ndawonye.
Yini ngaphezulu, Yiling has abadlali abanamava ucwaningo, okuyinto yakhiwa 29 academicians e China, nezinye kuhlanganise ochwepheshe elite wabuya, ongoti angaphandle, odokotela, amakhosi kanye zonke izinhlobo izisebenzi okhokhelwayo.
Yiling inkampani eyenza imithi , ezithaka imithi Chinese izinkampani ezisohlwini 50 (Stock Ikhodi: 002603), ungumnikazi yesimanje umkhiqizo ilindelwe capsule, capsule elithambile, ithebhulethi, granule, umjovo ketshezi njll, uye kucwaninga sina imikhiqizo, kuhlanganise: TCM, imikhiqizo ukunakekelwa kwezempilo, ukwakhiwa entshonalanga futhi TCM tincetu njll
Eminye imithi patent ikakhulukazi isimila (anticancer) -YangZhengXiaoJi (加链接) Capsule, okuyinto has umphumela esobala enamandla zabasiza abathile abanomdlavuza. Ngo-October 2017, i-Medical Research Center, eyasungulwa Yiling Group Inkampani kanye Cardiff University e-UK liye labizwa osekelwe iminyaka 4.
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo eba zokuxhumana ezijulile nobambiswano umuthi Chinese ngokumelene ucwaningo isimila, isicelo emitholampilo & ukwabelana kwezinsiza emakethe. It yasungulwa ucwaningo ezijulile ohlelweni kwezokwelapha Chinese YangZhengXiaoJi Capsule, okuyinto iye yakufakazela ukuthi singavimbela ngempumelelo ezihlukahlukene isimila Ukudlulela zivimbela imithambo yegazi basha isimila, beqondiswa isifo eseduze theory.
ShenLingLan, kudingeka olunye uhlobo anticancer izidakamizwa, isithako eziyigugu imithi yamaShayina kufanelekile iziguli amabili nokuntuleka ubende kanye nezinso, igazi stasis futhi ubuthi ekuqongeleleni ngaphambi nangemva ngemisebe nangamakhemikhali. Kungaba ngcono yokukhathala kwengqondo, ukukhathala, ubuvila, isisindo somzimba kanye nokunye.
JinLiDa granule, ohlotsheni 2 ngifundise ngesifo sikashukela Qi kanye yin ukuntula syndrome, izimpawu: omile ukuba ziphuze, polyorexia, umchamo, umzimba kancane kancane mncane, ukukhathala, ukujuluka, Fanre, ukuqunjelwa njll
Bazi tonifying izinso amaphilisi, izinso tonifying nokufudumala kwembulunga yang. Kusebenza kuze kube izinso yang ukuntula kubangelwa okhalweni nedolo ubuhlungu, isiyezi kanye tinnitus, Shenpi ukukhathala, lokukhohlwa, enyanya amakhaza.
Jujuboside Amafutha capsule. Omunye ukudla impilo uhlobo wenziwa capsule ukuma, Zizyphus uwoyela jujube ikhenela anganciphisa isikhathi sokulala ukubambezeleka, ukwandisa isikhathi kanye degree of kancane wave ubuthongo, ubuthongo okungukuthi engajulile futhi ubuthongo obukhulu. Isebenza ngempela. amaphepha amaningi abikwe.
Manje, Yiling imikhiqizo akhishwe eNingizimu Korea, eVietnam, eNgilandi, Canada, Netherlands, Singapore, Russia nokunye.
Yiling Isibhedlela ngemva kweminyaka yentuthuko ngokukhulu ukushesha 20 isibe yesimanje, okuhlangene imithi Chinese Western kuhlanganiswe esibhedlela lapho izinga eliphezulu abasebenza TCM e China.
Ukwelashwa kwemisipha yoma Ucwaningo olusha ekuvimbeleni nokulawula Chinese kazwelonke yendabuko emithini yamaShayina ekuphathweni Uchwepheshe focus - imisipha yoma ngenxa kazwelonke yendabuko emithini yamaShayina ekuphathweni Uchwepheshe focus, imisipha yoma Ngokuqhubeka isizinda nemfundo, anikezelwe isifo se-motor neuron, myasthenia gravis, kwemisipha isifo sokuwohloka futhi multiple sclerosis nezinye izifo zezinzwa.
UMnyango wezifo zamathambo iSifundazwe Hebei okukhethekile ukhiye imithi yamaShayina, ukusetshenziswa ukwelashwa bangaphakathi nabangaphandle, futhi izuzwe nomphumela omuhle ekwelapheni scleroderma, polymyositis, Sjögren syndrome, isifo Behcet sika, rheumatism, isifo samathambo, ankylosing spondylitis isifo yi inhlanganisela global nowasekhaya.
Umnyango Oncology (加链接) ihlanganisa TCM nezisentshonalanga imithi ndawonye, selaphe ngempumelelo izinkulungwane abanomdlavuza emhlabeni wonke. Ukuze izigaba ezahlukene abanomdlavuza zamukele izindlela ezahlukene ekwelapheni, ukusiza iziguli ngcono izivikeli mzimba, ngcono WBC, ngcono ophilayo ikhwalithi baphile isikhathi eside. Ezinhle ngokukhethekile eMhlanganweni nokwelapha umdlavuza wamabele, umdlavuza Colorectal, umdlavuza wesinye, wamaphaphu, umdlavuza esiswini kanye nezinye izinhlobo zomdlavuza.
Yiling Isikhungo sezempilo : Yiling Impilo Idolobha nge 'Dredging eseduze impilo ukulondolozwa isiko' njengoba hola ukuxuba ukulondolozwa impilo nakho kwamasiko, ukulondolozwa wezempilo project isipiliyoni, ukuphathwa kwezempilo, izidakamizwa efakiwe, ubuthongo impilo, ukulondolozwa ezempilo iholide-imali, impilo yezitolo namabhizinisi embukisweni kanye eyodwa-stop platform ukulondolozwa wezempilo.
A ehhotela five star, owokuqala impilo indaba ephathwayo ehhotela China, has yokudlela Chinese ukudla Western yokudlela, kukhona impilo yezitolo kuwo. Umsebenzi owumgogodla, into ekhethekile kakhulu mayelana Yiling Health Centre, e okusebenza TCM Ochwepheshe kanye nochwepheshe ezahlukene abasebenza izifo ezahlukene.
Lapha ungathola ukhululekile kakhulu ephilayo imvelo, izazi wemfanelo kakhulu futhi abanolwazi kuzothatha anakekele impilo yakho.
Yiling Medical Examination Centre , impilo luhlolo yesimanje, it has imvelo nenhle ukuphathwa sezempilo nge izindawo eziphambili ukuze ungakwazi ukujabulela ukuphathwa VIP.
amaphrojekthi izici uphenyo zihlanganisa: uhlole uxhumano futhi ukuxilonga, izinkozi ukudlala isimo sezempilo ukuskena umzimba, umthambo lonke isitsha igazi ukuthola, iconsi legazi ukuthola, isakhi sofuzo ukuthola, isifo sikashukela ingozi ukuhlolwa, TCM uMthethosisekelo ukuhlonza.
Yiling International Travel Agency, inikeza inkonzo-visa, umshwalense conselltion, amathikithi, inkonzo hotel yokubhuka, service kwezokuvakasha kwabamazwe ngamazwe nezinye inkonzo izinto inkampani yokulungisela abahambayo.
Ezigulini : ungakwazi beze uthole ukwelashwa ihlanganiswe, kokubili TCM & Western Medicine, nokudla, indawo yokuhlala, ukuzivocavoca, ukuvala abacaphuni abangobe, zonke izici ezithinta impilo ingase ikhishwe ku uhlelo lokwelapha.
Kubantu sub-impilo : wena unempilo, nje ingenamandla anele, udinga ukuphumula okuhle, umqondo ofanele ngempilo yakho, woza bahlala Yiling Health Centre, sizosebenzisa TCM ukuba zinakekele wena.
Ukuze abantu abayidingayo ngihlolwa njalo : woza uzothatha uhambo yezokwelapha, siyoba uchwepheshe wakho ukuphathwa impilo yonke empilweni yakho. Sizokwenza alamu yesixwayiso impilo yakho, aphathe sub-impilo ngaphambi kuziwa ku isifo.
Konke odinga ukwakha website amahle